အင်ကြင်းသန့်: ပြည်မြို့မှာ စားစရာ
ဟိုတစ်လောက ဘလော့ဂ်တစ်ခုကို ၀င်ဖတ်ရင်း “2009 Myanmar Blogger Gathering and Srikhittra Excursion” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးကိုတွေ့တော့ “ဟာ.....သီရိခေတ္တရာဆိုတော့ ငါတို့ ပြည်ကိုသွားတာပဲ” ဆိုပြီး စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်လိုက်မိပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက Gathering ထဲမှာပါတဲ့ Bloggerတွေဟာ ဘယ်နေရာကို လေ့လာရေးထွက်ကြရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတာကို အတော့်ကို ခေါင်းခြောက်အောင် တိုင်ပင်ပြီးမှ ပြည်မြို့ကို ရွေးခဲ့တာဆိုတဲ့အကြာင်းကို ဖတ်ရတော့ ပီတိတွေဖြာလို့ပေါ့။
ရွှေဆံတော်ဘုရား၊ ရွှေဘုံသာမုနိဘုရား၊ သရေခေတ္တရာပြတိုက်နဲ့ ဘောဘောကြီးဘုရားတို့ကို သွားရောက်လေ့လာဖြစ်ကြတဲ့ အကြောင်းတွေကို တွေ့ရတော့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ဆက်ဖတ်လာလိုက်တာ အောက်နားလည်းရောက်ရော နေ့လည်စာထမင်းစားဖို့အတွက် လမ်းညွှန်လုပ်ပေးတဲ့ ဂိုက်ကောင်လေးက ကားကြီးဝင်းထဲက ထမင်းဆိုင်ကို ခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ထိုဆိုင်မှထမင်းဟင်းများမှာ ထမင်းများက အေးစက်မာတောင့်နေပြီး၊ ဟင်းများကလည်း ငံပြာရည်နဲ့ အချိုမှုန့်ကို ရောနယ်ထားတဲ့ အတိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မွေးကတည်းက ဒီနေ့အထိ စားဖူးသမျှထဲမှာ အဆိုးဝါးဆုံးဟင်းလျာများဖြစ်ကြောင်း စသည်များကိုလည်း ဖတ်လိုက်ရရော “သေဟဲ့နန္ဒိယ”လို့သာ ပြောလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
ပြည်မြို့မှာ စားစရာဆိုင်တွေ ဒီလောက်တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီးရှိတာကို ပြည်မြို့ကသူတွေ ဘယ်သူမှ မစားတဲ့ ဒီကားကြီးဝင်းထဲက ထမင်းဆိုင်တွေကိုမှ ခေါ်သွားရသလားလို့ သူတို့တင်မဟုတ်ဘူး ကျွန်မပါ အဲဒီဂိုက်ကောင်လေးကို မေတ္တာပို့ လိုက်မိပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ပဲ ပြည်မြို့ကို သွားရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့သူတွေကို စားစရာဆိုင် ကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှိတဲ့နေရာလေးတွေကို လမ်းညွှန်ပြောပြချင်စိတ် ပေါက်လာတာနဲ့ပဲ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်မတို့ ပြည်မှာ ထမင်းဆိုင်ကောင်းကောင်းစားချင်ရင် ကန်လမ်းကိုသွားပါ။ ကန်လမ်းထဲမှာ ယုဇနထမင်းဆိုင် နဲ့ မေရွက်ဝါ ထမင်းဆိုင်တို့ဟာ ပြည်မှာတော့ နာမည်ကြီးထမင်းဆိုင်တွေပါပဲ။
ဒါမှမဟုတ် ပြည်မြို့က နာမည်ကျော် “ဒေါ်ဥထမင်းသုတ်” စားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ပန်းပဲတန်းလမ်းနဲ့ ပွဲစားလမ်းကို သွားပါ။ ကော်ရည်၊ ဆီချက်နဲ့ ဆီကော်တို့ စားချင်သေးလား....ရတယ်။ ကင်းဘုရားလမ်း နဲ့လမ်းရှည်လမ်းထောင့်ကို သွားလိုက်ပါ။ အဲဒီဆိုင်က အရသာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မဖေဖေနဲ့ အမြဲသွားစားနေကြဆိုင်ပေါ့။
ကျွန်မတို့ပြည်က ကော်ရည်က ရန်ကုန်ကကော်ရည်နဲ့ တော်တော်ကွာပါတယ်။ ပြည်ကကော်ရည်က ကော်မှုန့်ကို သကြားရောပြီး ကြက်သားနဲ့ ကော်ဟင်းရည်အဖြစ် ချက်ထားတာဖြစ်ပြီး အရောင်ကလည်း အကြည်မဟုတ်ဘဲ အနောက်ပါ။ အဲဒါကို ခေါက်ဆွဲနည်းနည်း၊ ပဲပင်ပေါက်နည်းနည်း၊ ကန်စွန်းရွက် ရေနွေးဖျောထားတာကို နည်းနည်းစီထည့်၊ အီကြာကွေးတွေကို ကတ်ကျေးနဲ့ ညှပ်ထည့်ပြီး အခုနအရည်နဲ့ ရောစားရတာပါ။ ကော်ရည်နဲ့ မဖြစ်မနေ တွဲဖက်စားသုံးရတာက ကြက်သွန်ချဉ် သို့မဟုတ် ဂေါ်ဖီချဉ် နဲ့အတူ ငြုပ်သီး အတောင့်ကြီးတွေကို ပါးပါးလှီးပြီး ချဉ်ရည်စိမ်ထားတဲ့ ငြုပ်သီးချဉ်ပါ။
မုန့်ဟင်းခါးကောင်းကောင်းကိုမှ စားချင်သူတွေအတွက်ကတော့ လမ်းရှည်လမ်းနဲ့ တရုတ်တန်းလမ်းထောင့်မှာ “နွယ်နွယ်” မုန့်ဟင်းခါးဆိုင် ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် အမြဲသွားနေကျဆိုင်လေ။ နွယ်နွယ် မုန့်ဟင်းခါးက ဆန်လှော်နဲ့ ချက်တာပါ။ ကျွန်မတို့ ပြည်မှာက မုန့်ဟင်းခါးဆိုရင် ဆန်လှော်မုန့်ဟင်းခါးပဲ ရောင်းကြတာ များပါတယ်။ အလှူတို့၊ မင်္ဂလာဆောင်တို့မှသာ မုန့်ဟင်းခါးကို ပဲနဲ့ ချက်ကြတာပါ။ အဲဒီ ဆန်လှော်မုန့်ဟင်းခါးထဲကို ဘူးသီးကြော်ရယ်၊ ငါးဖယ်နဲ့ ဘဲဥစားချင်တဲ့သူက ငါးဖယ်၊ ဘဲဥရယ် ထည့်ပြီး နံနံပင်နဲ့ ငြုပ်သီးမှုန့်လေး ထည့်ပြီးတော့များ စားလိုက်လို့ကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ဆွေမျိုးမေ့သွားမယ် (ပြည်ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် စားသာကြည့်လိုက်ကြပေါ့နော်)။
မုန့်ဟင်းခါးစားပြီး ဖျော်ရည်စုံသောက်ချင်သေးတယ် ဆိုရင်တော့ဖြင့် အဲဒီ နွယ်နွယ်မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က သစ်သီးဖျော်ရည်ဆိုင်ကိုပဲ ညွှန်းလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် ကြက်သားပလာတာကောင်းကောင်း စားချင်သေးလား....။ စစ်ကဲလမ်းမှာ “မွတ်တား ပလာတာ” ရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ဗလီနားမှာ “ရာကွတ် ပလာတာ” ရှိတယ်။ ကြက်သားပလာတာဆိုတာက ပဲကို ကြက်သားတို့ အာလူးတို့နဲ့ အရည်ကျဲကျဲ ချက်ထားပြီး အဲဒီထဲကို ပလာတာနဲ့ ဆမူဆာကို ညှပ်ထည့်ပြီး စားရတာပါ။ အဲဒီ ကြက်သားပလာတာက ပြည်မှာပဲ ရှိမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ တခြားမြို့တွေမှာရှိတယ်လို့ သိပ်မကြားမိသလိုပဲ (ကျွန်မ မသိတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ)။
ဒီလိုမှ မဟုတ်သေးပဲ လဘ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကောင်းကောင်းမှာ ထိုင်ချင်တာ ဆိုရင်တော့ ရွှေတစ်ချောင်းလမ်းမှာ “မေတ္တာရိပ်” ရှိတယ်။ မြို့သစ် သံလမ်းဂိတ် ဆေးရုံကြီးရှေ့မှာ “Day & Night” ရှိတယ်။ “မေတ္တာရိပ် ”ကတော့ ပြည်တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အများဆုံးထိုင်တဲ့နေရာ ဖြစ်ပြီး “Day & Night” ကတော့ GTC နဲ့GCCကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အများဆုံးထိုင်တဲ့ နေရာလေးလေ (ကျွန်မတို့လည်း အပါအ၀င်ပေါ့)။
တကယ်က ဒီဆိုင်တွေက နာမည်ကြီးဆိုင်တွေပါ။ အဲဒီဆိုင်တွေလောက် နာမည်မကြီးပေမယ့် သူ့ဟာနဲ့သူ နာမည်ရပြီးသား အရသာကောင်းတဲ့ ဆိုင်သေးသေးလေးတွေလည်း ပြည်မှာအများကြီးပါပဲ။ ဒါကဆိုင်တွေကိုပဲ ညွှန်းထားသေးတာပါ။ နောက်ကြုံမှ ပြည်မြို့က ဒေသစားစရာတွေအကြောင်း ရေးရဦးမယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ.... (ပြည်မြို့နဲ့ဝေးရာကို ရောက်နေကြသူများ) ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး ပြည်က အဲဒီဆိုင်တွေကို သတိရပြီးတော့ ပြည်ကို ပြန်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာရင်တော့ ငါ့တာဝန် မဟုတ်ဘူးနော်။ ငါကတောံ့ဒီပိုစ့်ကို ရေးနေရင်းကို ဘယ်နှစ်ခါမှန်း မသိဘူး တံတွေးတွေ မျိုမျိုချရတာလေ။း)))
(မှတ်ချက်။ ။ဆိုင်ကြော်ငြာခရလို့ မဟုတ်ပါ၊ တကယ်ကို စားကြည့်စေချင်လို့ ညွှန်းပေးတာပါ။ ဓါတ်ပုံလေးကတော့ google ကနေရှာထားတာပါ။)
Posted by အင်ကြင်းသန့် at 8:30 AM
အင်း.. စားချင်လိုက်တာနော်.. ဒေါ်ဥ ထမင်းသုတ်ကတော့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး တောင်စာထဲထည့်ရေးထားသေးတယ် ထင်တာပဲ... ဟုတ်လား?.... ပြန်ရင် သွားစားမယ်ကွာ....
မေတ္တာရိပ်ကိုတော့ ခုထိဆို ခုထိ လွမ်းတုန်း
အစ်မ ပြည်ကိုတန်းပြန်ချင်စိတ်ပေါက်အောက် ရေးထားတာပဲနော်
ပြီးတော့ ကမ်းနားလမ်း အကြော်လည်းစားချင်တယ် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကိုငေး
နောက်ပြီး အဲနားမှာလေ ကြည်နူးရိပ်ဆိုတဲ့ဆိုင်ရှိတယ်လေ ကော်ပြန့်ကြော်တို့ ကြာဆံချက်တို့သိပ်ကောင်းတာ
မေတ္တာရိပ် က ဂွမ်းသွားပြီဗျို့ ။ အဲဒီဆိုင်မှာ ထိုင်တဲ့ လူတောင် မရှီသလောက်ပဲ ။ နွယ်နွယ်ကတော့ ပန်းပန်လျှက်ပဲ ။ ဒေါ်ဥလည်း ဂွမ်းတာအတော်ကြာပေါ့ ။ စံနန်းဥိးနားမှာ လက်စွမ်းပြ ထမင်းသုပ်က မင်းမူနေတယ် ။ ကမ်းနားက အကြော်ကတော့ ကမ်းနားဘက် ညဈေးထိပ် ဟိန္ဒူ ကျောင်းနားက ဟာ မဆိုးဘူး ။ ဒေါ်ဥကတော့ လှည်းတန်းမှာ တဆိုင်ရှိတယ် ။ ဟိုတုန်းက အရှိန်နဲ့ ခပ်တည်တည် လုပ်စားတုန်းပေါ့ ။
ကျနော့်ဖြင့် ဖတ်ရင်းနှင့် ကိုယ်ကိုတိုင် ပြည်မြို့ထဲမှာ လမ်းတလားနေရတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်ဗျာ..။
လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းဆိုလို့ ပြောရဦးမယ်။လက်ဖက်ရည် တကယ်ကောင်းတာက ကမ်းနားက ဆိပ်ကမ်းသာ၊ topstar ဆိုင်တွေက မေတ္တာရိပ် ထက်သာပါတယ်။ပေါက်စီကောင်းကောင်းစားချင်ရင် မင်္ဂလာနံနက်ခင်း ကိုသွား။ တစ်ညလုံး ဖွင့်တဲ့ဆိုင်ရှာချင်ရင် ညဈေးနားမှာ ဒေးဗစ်ဆိုင်ရှိတယ်။ ညဈေးက နန်းကြီးသုပ်နဲ့ ရွှေကြည်ဆနွမ်းမကင်း၊ကျောင်းကြီးအိုးတန်းရပ်ကွက်ထဲကforever ဆိုင်နဲ့ ဆေးရုံဝင်းကြီးနောက်က မြကျောက်ဆိုင် တွေကလည်း လူရှင်းပြီး အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်လို့ ကောင်းတယ်။တံတားအောက်က view point ကတော့လူနည်းနည်းရှုပ်တယ်။ဈေးလဲကြီးတယ်။အိုဆာကာခေါက်ဆွဲ စားချင်ရင်တော့ ရွေတောင်မြို့ အထိသွားရမယ်။ဟဲ ဟဲ ကျွန်တော်စားချင်တာလေးတွေ ပြောတာနော် ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အစ်မက ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်တွေထားခဲ့တာကိုး.....စိတ်မဆိုးနဲ့ နော်
@lay>>> မောင်လေးလား ညီမလေးလားတော့ မသိဘူး...အစ်မက ဆိုင်တွေကို တမင် ချန်ထားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်...အစ်မ ပြည်ကနေ ထွက်လာခဲ့တာ အတော်ကြာပြီမို့ ပြည်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နာမည်ရှိမုန့်ဆိုင်တွေကို လည်းမသိတော့လို့ပါ...အစ်မက အစ်မ ရှိနေစဉ်အခါတုန်းက နာမည်ကြီးဆိုင်တွေကိုပဲ သိတာမို့ပါ...ညဈေးတန်းမှာ အစ်မ အကြိုက်ဆုံးက ဂျုံနန်းကြီးသုတ်ပဲ...လဘ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေကျတော့ အစ်မက ကိုယ့်ကျောင်းနားကလွဲရင် တခြားနေရာတွေမှာ သိပ်မထိုင်ဖြစ်တော့ သိပ်နှံ့နှံ့စပ်စပ် မသိဘူး...ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်...အစ်မ စိတ်မဆိုးပါဘူး...အခုလို ဖြည့်စွက်ပြောပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်နော်...
ပြည်မှာ ဒီလောက် အစားအသောက် သားငါးပေါတာ။ ငါးသလောက်ဥတွေနဲ့ ထမင်းသုတ်၊ ဘုရာကြီး အဆင်းက မုန့်ဟင်းခါး လက်ဘက်ရည် ပဲပလာတာ ကြက်သားပလာတာ အသုတ်စုံ ဘာစားစား အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ဒီလောက် ထမင်းချက် ဟင်းချက် ကောင်းတဲ့ အရပ် ဒီလို ဆိုးဆိုးရွားရွား ဆိုင်တော့ မကြုံဖူးပါဘူး။
ညစ်ပတ်တာတော့ ရှိတယ်။ စားမကောင်းတာတော့ ရှားရှားပါ။
ပြောရင်း မြေအိုး မလိုင် စားချင်လာပြီ။
mandalay mg said...
1984-1987 တုန်းကတက်ခဲ့တဲ့GTI(PYAY)ကျောင်းသား ဘ၀ကိုတောင်ပြန်အမှတ်ရမိပြီ။ ထမင်းသုပ်။နောက်ပြီးရှိသေးတယ်. ဆီကော..် အရမ်းသတိရတာဘဲ။